Whatsapp - Androidsis | Androidsis ပါ
WhatsApp သည် Android သုံးစွဲသူများအကြားလူကြိုက်အများဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မိသားစုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလွတ်လပ်စွာနှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည့်လျှောက်လွှာတစ်ခု။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအစားရှိပြီး၎င်းတွင်သင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုသိနိုင်သည်။
WhatsApp နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ၊ လှည့်ကွက်များသို့မဟုတ်သင်ခန်းစာများအားလုံးကိုဤအခန်းတွင်သင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် application မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိဖို့၊ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များရောက်ရှိခြင်း (သို့) သင်၏ Android ဖုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောသုံးရန်လှည့်ကွက်များ။ အကယ်၍ သင်သည် app ကိုအသုံးပြုလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကဤအမျိုးအစားသည်သင်၏အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
ဒီလှည့်ကွက်တွေနဲ့ WhatsApp မှာအဆက်အသွယ်တွေကိုဘယ်လိုဖျောက်မလဲ
WhatsApp တွင်အဆက်အသွယ်များဝှက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး တည်စေနိုင်သောအကြောင်းအရင်းများသည်ကွဲပြားမှုအများဆုံးနှင့်မူတည်သည်။
WhatsApp မှတဆင့်ဂိမ်းများသည်ယခုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းခေတ်စားလာသည်။ သူတို့ကအမျိုးမျိုး ...
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
WhatsApp ကို multi-device multi-support ဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်များကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် ...
အဆက်အသွယ်များအတွင်းနံပါတ်ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ WhatsApp ကိုအပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့ကိုဘယ်လို
ငါတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများသည်တလျှောက်လုံးတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်။
WhatsApp ဝက်ဘ်တွင်သို့မဟုတ် Android အက်ပလီကေးရှင်းတွင်တိုက်ရိုက်စာလုံးအရွယ်အစားကိုတိုးခြင်း၊
por Francisco Ruiz လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်နာမည်ကြီးသော WhatsApp အပလီကေးရှင်းကိုအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်းများကိုစာရင်းတစ်ခုအဖြစ်ယူဆောင်လာလိုသည်။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
မနေ့ကကျွန်ုပ်တို့ WhatsApp သည်စကားဝိုင်းများ၏မိတ္တူများကိုနောက်ဆုံးတွင်စာဝှက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ပါကယခု၎င်းသည်ပေးပို့ခြင်းကိုစမ်းသပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိထားသည်။
နောက်ဆုံးနှင့် WhatsApp သည်ကျွန်တော် upload နှင့် iCloud သို့ကူးယူသော backup များကို encrypt လုပ်လိမ့်မည်
ငါတို့သိသလောက်ဆိုလျှင် WhatsApp သည် Google Drive အရန်ကူးခြင်းများနှင့် ...
WhatsApp messaging application သည်အသုံးပြုသူများကောင်းစွာလက်ခံရရှိမည့်အရေးကြီးသော update ကိုရရှိထားသည်။ The …
WhatsApp Black၊ Telegram Black နှင့် AMOLED ဖန်သားပြင်များအတွက်အထူးပြုပြင်ထားသောအခြားအက်ပ်များ